Board Meetings - Part 2
Karachi, Askari Bank Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 22, 2019 at Rawalpindi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company h ...
Karachi, Faysal Bank Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 22, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the 2nd Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company ...
Karachi, Allied Bank Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 20, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company has d ...
Karachi, Philip Morris Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 22, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the c ...
Karachi, KSB Pumps Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 21, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company ...
Karachi, Otsuka Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 27, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Annual Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company has ...
1 2 3 4 5 6 7 … 552